Madaxweynaha Faransiiska oo Itobiya Booqasho ku Tagi Doona Dhamaadka Bisha January 2011 – Rasaasa News
Madaxweynaha Faransiiska oo Itobiya Booqasho ku Tagi Doona Dhamaadka Bisha January 2011
Jan 8, 2011 Eritrea, ethiopia, Madaxweynaha Faransiiska oo Itobiya Booqasho ku Tagi Doona Dhamaadka Bisha January 2011, Ogaden, somalia
Addis Ababa – Jan 07, 2011 – Madaxweynaha dalka Faransiiska Madaxweyne Nicolas Sarkozy, ayaa waxaa uu booqasho ku tagi doonaa dalka Itobiya dabayaaqada bisha January, isaga oo uga sii gudbidoona dalal dhawra oo ku yaal bariga qaarada Afrika.
Booqashada Madaxweynaha Faransiiska, ayaa xiiso gaar ah u leh dalalka Afrikada Bari, madaama uu dalka Faransiisku yahay dalalka ugu awooda badan barqwaaqo sooranka Yurub, oo ah dalalka bixiya deeqda ugu badan ee la siiyo Afrika.
Dalka Itobiya oo ah xarunta laga hago siyaasada Qaarada Afrika, kana mid ah dalalka ugu tirada badan Qaarada ayey dalalka reer galbeedku aad xiiso ugu hayaan, xiisahaas oo ay ugu wacan tahay Gaska tirada badan ee ku jira gabalka Ogaden.
Lacagaha daynta ah ee sida haqab la,aanta ah loo siiyo dalka Itobiya ayaa lagu siiyaa qaniimada shidaalka faraha badan ee ku jirta gabalka Ogaden ee dalka Itobiya.
Maxaweyne Sarkozy, ayaa la filayaa in uu madaxda Itobiya kala xaajoodo xaalada amaan ee geeska Afrika iyo heshiisyada nabadeed ee ay dawlada Itobiya la gaadhay dabayaaqadii sanadkii dhamaaday Jabhadihii hore uga dagaalami jiray gabalka Ogaden. Sibadalada laga sameeyey dhinacyada horumarinta iyo nabad galiyada tan iyo intii ay nabad galiyadu ka dhacday gabalka Ogaden.
Xaalada amaan xumo ee dalka burburay ee Somaliya iyo waliba sidii laga yeeli lahaa labada maamul gabaleed Puntland iyo Somaliland oo iyagu sheegay in ay ka go,ayaan dalka Somaliya, oo ay madaxweynayaashoodu ku kulmi doonaa Washington Bisha January dhamaadkeeda.
Si kastaba ha ahaatee booqashada Sarkozy ayaa xiiso u leh dallka Itobiya iyada oo uu kala xaajoon doona sidii laga yeeli lahaa arimaha geeska Afrika.
Abaar Adag oo ka Jirta Degaanka Somalida Ogadeeniya